रवीन्द्रको क्षेत्रमा वामदेव ! - Jhilko
रवीन्द्रको क्षेत्रमा वामदेव !
गएको बुधवार ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पोखरामा हुने श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा भाग लिन नेकपाको तर्फबाट बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ गएका छन् ।
रवीन्द्र अधिकारीसँग बामदेवको भावनात्मक सम्बन्ध लगायतका कारण अधिकारीको अन्तिम कार्यक्रममा पार्टीले उनैलाई छानेको हुनसक्छ । यसरी नै पार्टीमा एकताको भाव देखाउन नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि सहभागी गराएको हुनसक्छ । रवीन्द्र अधिकारी पूर्व नेकपा एमाले ०५४ सालमा विभाजित हुँदा बामदेवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माले) तिर लागेका थिए । त्यहीँदेखि गौतम र अधिकारीको सम्बन्ध घनिष्ठ रही आएको थियो ।
पोखराको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा पूर्व नेकपा मालेका नेता वामदेवका अलावा योगेश भट्टराईसहितका नेता काठमाडौंबाट सहभागी भएका छन् । यसले उनीहरुको रवीन्द्रसँगको भावनात्मक सम्बन्ध गाढा रहेको नै देखाउँछ ।
पोखराको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा गौतमको सहभगितालाई लिएर अनेक अडकलबाजी गर्न थालिसकिएको छ । संसदमा अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रबाट बामदेवलाई स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्नेको लागि उनको यो सहभागिता अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
सरकारको बहालवाला मन्त्रीको अन्त्येष्टि कार्यक्रममा सरकारकै कुनै वरिष्ठ मन्त्रीको सहभागिता हुनु जायज हुने हो । यो कार्यक्रममा दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष आउने अपेक्षा पोखरावासीको थियो । तर, त्यसो नगरेर विगत संसदमा पराजीत गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई पठाएर यस्तो आशंका गने ठाउँ प्रसस्त गरिदिएको छ । निर्वाचनमा पराजय व्यहोरिसकेपछि पनि सांसद बन्न गौतमले पटकपटक प्रयास गरेका थिए ।
नारायणकाजी पनि सांसद बन्न लालायित भए पनि उनले मुखै भने फोर्न सकेका छैनन् ।
चीन रूसले पूर्व चीन सागर र जापान सागरको आकाशमा संयुक्तरूपमा...
उत्तर पूर्व एसिया र विश्वभर नै अमेरिकी सैनिक वर्चस्वलाई धक्का दिन चीन रूसले उच्च...
नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष...
चीनको हुबे प्रान्तमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिएसँग देशका कतिपय भागमा रेल तथा अन्य...